21.5 Intshi yoMqondiso oMfithi oNyanisekileyo oMfati-i-China Chengdu Zenghong Sci-Tech
Uluntu kunye neNtengiso
Iindaba & Inqaku
21.5 Intshi yeMpawu yoMfati oyiNyaniso
I-TouchDisplays Multifunctional Touch Interactive Digital Signage ihambisa i-Windows-based enamandla okanye iqonga elisekelwe kwi-Android.Ngobunzima obulungiselelweyo bubonelela ngemveliso yebakala lorhwebo.Ukucofa okuqikelelweyo kunye nokunyuka kweVESA kuyenza ihlangabezane nenjongo ezininzi, iglasi epholileyo eyenzelwe ukumelana nemeko yokusebenza ngokugqithisileyo.
I-TouchDisplays imiqondiso esebenzisanayo ebonakaliswe nobuchule bayo bezinto ezininzi.Senza iikhiyoski ezilungiselelweyo ezakhelwe ngaphakathi okanye ubukhulu obulungiselelweyo ukuze bulingane iikhiyoski zakho.Ngemingxuma yeVESA ehambelanayo, iyakwazi ukunyuswa eludongeni okanye umgangatho-ume ngesibiyeli.Ukuxhamla ekukhanyeni okuphakamileyo okukhethiweyo kunye ne-engile yokujonga yokwenyani, imiqondiso yethu yedijithali inokukhanya kwelanga.
Amandla kakhulu kwaye aphantsi ukusetyenziswa kweeprosesa ezingena fanless;
Iinketho ze-CPU eziguquguqukayo kwiinguqulelo ezahlukeneyo ze-Android;
Uluhlu olubanzi ukusuka kwi-Intel j1800 ukuya kwi-i7 yamva nje yesizukulwana sesi-7 kwiifestile.
I-2151E Chukumisa yonke kwiPC enye iqhuba usetyenziso olubalulekileyo ngokukhawuleza, ikunceda uncede abathengi bakho ngokukhawuleza.
Iprosesa engenafan ke ngoko ukusetyenziswa okuphantsi kunye nendawo engenangxolo.
Ukunikezelwa kwee-interfaces ezininzi: i-HDMI / VGA, i-USB, i-Rj45, i-Mic kunye nabanye, ukufakwa kwegalelo levidiyo kunye nokukhutshwa ngokukhawuleza kwaye kulula.I-USB enikwe amandla iyafumaneka kuqhagamshelo lweperipheral ngakumbi.
Ngaphaya kwePACP enamandla ebonisa isikrini sokuchukumisa okuninzi, iiperipherals ezininzi ziyafumaneka ukuhlangabezana nazo zonke iintlobo zezicelo, kubandakanywa unxibelelwano olukufutshane nebala (NFC/RFID), isifundi semag strip (MSR) abashicileli abashushu kunye nabanye.I-WiFi eyakhelwe-ngaphakathi kunye nebluetooth yenza ukuba ikwazi ukuqhagamshelwa nanini na naphi na.
Ngaphambili: Touch Screen Monitor 19 - True Flat Touch Monitor - TouchDisplays
Okulandelayo: 19 Intshi Vula isakhelo Touch Monitor
I-TouchDisplays 'I-IDS ye-Touch (I-Interactive Digital Signage) ngenkxaso yobuchule obuphezulu, ubuchule bokuvelisa ngokuthe nkqo, Yenzelwe lonke uhlobo loshishino olunobuchwepheshe be-LCD bamva nje ukuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu kunye namava abalaseleyo omsebenzisi.
Idibanisa ikhompyuter yescreen esichukumisayo somgangatho worhwebo kunye neprosesa enamandla ye-Android ehambisa izantya zekhompyutha ezingahambelaniyo.
Ngesisombululo esilungiselelwe umthengi unikezela ngeesayizi ezahlukeneyo.
Isikrini sokuchukumisa esiXilelwe esinamandla
Chukumisa ixesha lokuphendula
TFT LCD (Isibane se-LED sangasemva)
Indawo yeSkrini eluncedo
Esona siGqibo (somthonyama).
Ipaneli ye-LCD Pixel pitch
LCD panel Imibala
Ipaneli ye-LCD Ukukhanya
Ixesha leempendulo lephaneli yeLCD
(eqhelekileyo, ukusuka embindini)
± 89° okanye 178° iyonke (ekhohlo/ekunene)
± 89° okanye 178° iyonke (phezulu/phantsi)
isiphumo Isiqhagamshelanisi somqondiso wevidiyo
I-Mini D-Sub 15-Pin uhlobo lweVGA kunye nohlobo lwe-HDMI
usb 2.0*4(usb 3.0*2 ozikhethela)PCI-E(4G SIM khadi, wifi kunye Bluetooth ozikhethelayo)
Uhlobo loBonelelo lwaMandla
Beka iliso kwi-interface yegalelo: + 12VDC ±5%,6.0 A;DC Jack (2.5￠)
AC ukuya DC amandla ngezitena igalelo: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Ukusetyenziswa kwamandla: 50W
(Yilungise iModyuli yeKhompyutha)
ECM3:Intel iprosesa J1900 (Quad-core 2.0GHz/2.4GHz,Fanless)
ECM4:Iprosesa ye-Intel i3-4010U (Dual Core 1.7GHz, engenaFan)
ECM5:Intel iprosesa i5-4200U (Dual Core 1.6GHz/2.6GHz Turbo, Fanless)
ECM6:Intel iprosesa i7-4500U (Dual Core 1.8GHz/3GHz Turbo, Fanless)
SATA3:I-HDD 500G(ukuya kuthi ga kwi-1TB ungayikhetha) okanye i-SDD 32G (ukuya kuthi ga kwi-128G ungayikhetha)
Inkumbulo:I-DDR3 4G(yandisa ukuya kuthi ga kwi-16G Ngokuzikhethela)
Uphuculo lweCPU:J3160 & I3-I7 uthotho 5th6th7thngokuzikhethela
Inkqubo yokusebenza:Win7Pos Ready7Win8XPWinCEVistaLinux
ECM9:I-Cortex-A53 8Core 1.5GHz;GPUI-PowerVR G6110
I-ROM:1G(ukuya kuthi ga kwi-2G4G ngokuzithandela);Flash:8G(ukuya kuthi ga kwi-32G ungayikhetha)
Inkqubo yokusebenza: 5.1 okanye 6.0
Ukusebenza: 0°C ukuya ku-40°C ;Ukugcinwa -20°C ukuya kuma-60°C
Ukusebenza: 20% -80%;Ugcino: 10%-90%
Imilinganiselo yeKhathoni yokuthumela
Imveliso eyiyo: 5.1 kg(1 Piece) ;Ukuthumela ngenqanawa: 13.2 kg( 2 PCS)
Iminyaka emi-3 (Ngaphandle kwephaneli ye-LCD unyaka omnye)
Ubomi besibane sokukhanya: ngokuqhelekileyo iiyure ezingama-50,000 ukuya kwisiqingatha sokukhanya
I-CE/FCC/RoHS (UL okanye i-GS eyenzelwe wena)
75 mm kunye ne-100 mm i-VESA yokunyuka
15 intshi Touch All-in-one POS
15.6 intshi Touch All-in-one POS
18.5 intshi Touch All-in-one POS
Umenzi okhokelayo wesisombululo se-smart touch
Fumana ulwazi oluneenkcukacha
Landela ukuze ufumane uhlaziyo lwamva nje
iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza Android Pos Machine, Zonke kwiSikrini esinye seTouch Pos, Indawo yokutyela Pos Machine, Konke kwiPos enye, Pos System For sale, Pos Machine All in One,